Sarintanin' i Madagasikara maneho ny faritra misy ireo foko ao aminy.
Ny foko eto Madagasikara dia vondron' olona isan' ny vahoaka malagasy izay heverina fa iray faritra niaviana, nanana fandaminana ara-pôlitika iraisany na nitoviany tamin' ny vanimpotoana faha mpanjaka, manana ny fomba fitenenany ny teny malagasy izay atao hoe fitenim-paritra, sns. Tsy misy famaritana tokana eken' ny maro ny hoe foko ka tsy fantatra noho izany ny tena isan' ny foko eto Madagasikara. Mahazatra ny maro anefa ny miteny hoe "foko valo ambin' ny folo" na dia tsy mifanandrify amin' ny tena marina ara-tantara izany. Ireo ataon' ny Malagasy ankehitriny hoe "foko" ireo dia matetika vondrom-poko raha ny tena marina noho ny faritra misy azy midadasika loatra sy noho ny fisian' ny vondrona maro ao anatin' io vondrona lehibe io manana ny anaram-pokony manokana avy. Ny hafa indray dia mety zana-poko noho izy vitsy, monina amin' ny faritra kely dia kely sady tsy mifankaiza amin' ny foko mifanila faritra iaviana aminy na ara-piteny na ara-kolontsaina. Tsy singa amaritana ny atao hoe "foko" eto Madagasikara na ny toetra ara-batana toy ny fihodirana, na ny toetran' ny volo, na ny toe-batana. Ny fitenenana amin' ny fitenim-paritra koa dia matetika tsy heverin' ny olona ho singa mamaritra ny atao hoe "foko" satria maro ny Malagasy avy amin' ny foko na vondrom-poko iray izay mahay tenim-paritra roa na maro noho izy valovontaka.
2.1.1 Ny Antankarana
Ny Antankarana na Tankarana dia vondrom-poko ao amin' ny tendro avaratr' i Madagasikara, ao amin' ny Faritanin' Antsiranana. Monina amin' ny faritra lavalava manaraka avy eo Ampasimena (andrefana) mankany Vohimarina (Vohémar). I Antsiranana, sy i Vohimarina no tanàn-dehibe any. Niisa 50 000 any ho any ny Antakarana tamin' ny taona 2013.
Ny Bezanozano dia vondrom-poko ao amin' ny tany lemaka manodidina an' i Mangoro, voafaritry ny tany onenan' ny foko Sihanaka ao avaratra, ny Betsimisaraka ao atsinanana, ary ny Merina ao andrefana. Ireto ny tanàn-dehibe ao: Moramanga sy Beparasy ary Anjiro. Niisa 100 000 any ho any ny Bezanozano tamin' ny taona 2011.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Foko_eto_Madagasikara&oldid=1042983"
Voaova farany tamin'ny 13 Janoary 2022 amin'ny 05:33 ity pejy ity.